शीत युद्ध क्रसवर्ड #1
शीत युद्ध क्रसवर्ड #2
शीत युद्ध क्रसवर्ड #3
शीत युद्ध क्रसवर्ड #4
शीत युद्ध क्रसवर्ड #5
शीत युद्ध क्रसवर्ड #6
चिसो युद्ध कोर्स
शीत युद्ध कागजातहरू
शीत युद्ध निबन्ध प्रश्नहरू
शीत युद्ध इतिहासकारहरू
शीत युद्द इतिहास लेखन
शीत युद्द मेमोरी क्विज - घटनाहरू 1945 बाट 1950
शीत युद्द मेमोरी क्विज - घटनाहरू 1950 बाट 1959
शीतयुद्ध मेमोरी क्विज - घटनाहरू 1960-1979
शीत युद्द मेमोरी क्विज - घटनाहरू 1980 बाट 1991
शीत युद्ध स्मृति प्रश्नोत्तरी - समूहहरू
शीत युद्ध स्मृति प्रश्नोत्तरी - नेताहरू
शीत युद्ध स्मृति प्रश्नोत्तरी - सर्त र अवधारणा (I)
शीत युद्ध स्मृति प्रश्नोत्तरी - सर्त र अवधारणा (II)
कोल्ड वार मेमोरी क्विज
कोल्ड वार चलचित्र र टिभी
चिसो युद्ध क्विज #1
चिसो युद्ध क्विज #2
चिसो युद्ध क्विज #3
चिसो युद्ध क्विज #4
चिसो युद्ध क्विज #5
चिसो युद्ध क्विज #6
चिसो युद्ध क्विज #7
चिसो युद्ध क्विज #8
चिसो युद्ध क्विज
शीत युद्ध शीर्षकहरू
शीत युद्ध को हो
चिसो वार wordsearch - अवधारणाहरु
शीतयुद्ध wordsearch - घटनाहरु
शीतयुद्ध wordsearch - समूहहरू
शीतयुद्ध wordsearch - व्यक्ति
चिसो युद्ध शब्द खोज - ठाउँहरू
चिसो युद्ध wordsearches
चिसो युद्ध 1945 र 1991 बीचको अन्तर्राष्ट्रिय तनाव र टकरावको लामो अवधि थियो। यसलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, सोभियत संघ र उनीहरूका सहयोगीहरूबीचको कडा प्रतिस्पर्धाको रूपमा चिह्न लगाइएको थियो।
'शीतयुद्ध' भन्ने वाक्यांश लेखक जर्ज ओर्वेलले लेखेका थिए जसले अक्टूबरमा एक्सएनयूएमएक्सले "भयानक स्थिरता" को भविष्यवाणी गरेका थिए जहाँ शक्तिशाली राष्ट्रहरू वा गठबन्धनहरू एकअर्कालाई नष्ट गर्न सक्षम भएका प्रत्येकले कुराकानी वा कुराकानी गर्न इन्कार गर्दछन्।
ओर्वेलको गम्भीर भविष्यवाणी 1945 मा प्रकट हुन सुरु भयो। युरोप नाजी अत्याचारबाट स्वतन्त्र भएपछि यो पूर्वमा सोभियत रेड आर्मीले र पश्चिममा अमेरिकीहरू र बेलायतीहरूले ओगटेको थियो। युद्धपश्चात युरोपको भविष्यलाई चार्टर्ड गर्ने सम्मेलनहरूमा, तनाव देखा पर्‍यो सोवियत नेता बीच जोसेफ स्टालिन र उनका अमेरिकी र बेलायती समकक्षहरू।
मध्य-एक्सएनयूएमएक्स द्वारा सोभियत संघ र पश्चिमी राष्ट्रहरूबीच युद्धपछिको सहयोगको आशा धराशायी भइसकेको थियो। पूर्वी युरोपमा, सोभियत एजेंटहरूले समाजवादी पार्टीहरूलाई सत्तामा धकेले र बेलायती राजनीतिज्ञले प्रेरित गरे विन्सटन चर्चिल एक "को चेतावनीफलामको पर्दायुरोपमा ओर्लदै। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लागू गरेर जवाफ दिए मार्शल योजना, चार वर्षको $ 13 अरब सहायता प्याकेज यूरोपीयन सरकारहरू र अर्थव्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न। 1940s ढिलो सम्म, सोभियत हस्तक्षेप र पश्चिमी सहायताले यूरोपलाई दुई समूहमा विभाजित गरेको थियो।
शीत युद्धको समयमा युरोपको विभाजन देखाउँदै गरेको नक्शा
यस डिभिजन को केन्द्रबिन्दु थियो युद्ध पछि जर्मनी, अब दुई भागमा काटियो र यसको राजधानी शहर बर्लिन चार विभिन्न शक्तिहरू द्वारा कब्जा गरियो।
1948 मा, सोभियत र पूर्वी जर्मन प्रयास गर्दछ बर्लिनबाट पश्चिमी शक्तिहरू भोकाउनु इतिहासको सब भन्दा ठूलो एयरलिफ्टद्वारा असफल भयो। 1961 मा सरकारको पूर्वी जर्मनी, सामना गर्दै आफ्नै मान्छेहरूको ठूलो प्रस्थान, यसको सिमाना लक गरियो र बर्लिनको विभाजित शहरमा आन्तरिक अवरोध खडा गर्‍यो। को बर्लिन भित्ताजसलाई यो थाहा थियो, शीत युद्धको चिरस्थायी प्रतीक बन्यो।
शीतयुद्ध तनाव युरोपको सिमाना बाहिर पनि फैलियो। अक्टूबर 1949 मा, चिनियाँ क्रान्ति माओ जेदong्ग र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको जीत संग एक निष्कर्षमा पुगे। चीन द्रुत रूपमा औद्योगिक बन्यो र आणविक शक्ति बन्न पुग्यो जबकि साम्यवादको धम्कीले शीतयुद्धको ध्यान एशियामा पुर्‍यायो। 1962 मा, को खोज क्युबा टापु राष्ट्रमा सोभियत मिसाइलहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघलाई आणविक युद्धको छेउमा धकेले।
यी घटनाहरूले शंका, अविश्वास, व्याकुलता र गोपनीयताको अभूतपूर्व स्तरलाई उकाले। एजेन्सीहरू जस्तै केन्द्रीय खुफिया एजेन्सी (सीआईए) र Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) ले उनीहरूलाई बढायो गुप्त गतिविधिहरू विश्वभरि, दुश्मन राज्य र शासनहरूको बारेमा जानकारी जम्मा गर्दै। उनीहरूले अन्य देशहरूको राजनीतिमा हस्तक्षेप पनि गरे, भूमिगत आन्दोलन, विद्रोह, कुपन डी 'एट्याट्स र प्रोक्सी युद्धहरू.
सामान्य व्यक्तिहरूले वास्तविक समयमा शीत युद्धको अनुभव गरे जुन सब भन्दा गहन एउटा हो प्रचार अभियान मानव इतिहासमा। चिसो युद्ध मानहरू र आणविक विकृति सहित लोकप्रिय संस्कृतिको सबै पक्षहरू जटिल चलचित्र, टेलिभिजन र संगीत.
अल्फा हिस्ट्रीको शीत युद्द वेबसाइट 1945 र 1991 बीचको राजनीतिक र सैन्य तनाव अध्ययन गर्न विस्तृत पाठ्यपुस्तक गुणस्तरको स्रोत हो। यसले लगभग 400 बिभिन्न प्राथमिक र माध्यमिक स्रोतहरू समावेश गर्दछ, विस्तृत सहित शीर्षक सारांश, कागजातहरू, टाइमलाइनहरू, शब्दावलीहरू र जीवनीहरू। उन्नत विद्यार्थीहरूले शीत युद्धको बारेमा जानकारी पाउन सक्छन् इतिहास लेखन र इतिहासकारहरु। विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो ज्ञान परीक्षण गर्न सक्दछन् र सहित अनलाइन गतिविधिहरूको दायराको साथ रिकल गर्न सक्छन् quizzes, शब्दकोष र wordsearches। प्राथमिक स्रोतहरू पछाडि, अल्फा ईतिहासमा सबै सामग्री योग्य र अनुभवी शिक्षकहरू, लेखकहरू र ईतिहासकारहरूद्वारा लेखिएका हुन्।
यस शीत युद्द साइटले 1945 र 1991 बीचको वैश्विक घटनाहरू र तनावको बारेमा लेखहरू, स्रोतहरू र परिप्रेक्ष्यहरू समावेश गर्दछ। यो साइट अल्फा ईतिहासले सिर्जना गरेको हो र 308,862 पृष्ठहरूमा 405 शब्दहरू समावेश गर्दछ। थप जानकारीको लागि हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् सोधिने प्रश्न पृष्ठ or उपयोग नियम.